डेनमार्कको स्थानीय चुनावमा नेपाली उम्मेद्वारले के पाए? :: Setopati
डेनमार्कको स्थानीय चुनावमा नेपाली उम्मेद्वारले के पाए?
प्रकाश सापकोटा कोपनहेगन, मंसिर १८
डेनमार्कको स्थानीय चुनावमा पहिलो नेपाली उम्मेद्वार हरि न्यौपानेले स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्न पाएनन्। केही भोटको कमीले उनी पछि परे। तर यसलाई हार मान्न उनी तयार देखिँदैनन्। ‘तथ्यगत हिसाबले चुनाव हारियो तर, सारभूत हिसाबले चुनाव जितिएको हो,’ उनले भने।
हाल दोभाषे र शरणार्थी परामर्शदाता अथवा मेण्टरका रूपमा कार्यरत न्यौपानेको चुनावी परिणाम पश्चात सबैमा एक प्रकारको कौतुहलता छायो, विशेष गरेर नेपाली समुदायमा। किन र कसरि नतिजा फरक हुन गयो ?
अनुमान लगाउन थालियो- के अब डेनमार्कमा उनको राजनीति सकियो? के न्यौपानेले निरन्तरता देलान त राजनीतिमा?
जवाफमा न्यौपानेले तर्क पस्किएका छन्- यो स्थानीय चुनावी दौरान अन्तर्राष्ट्रिय समाजका व्यक्तिहरू, विभिन्न देशबाट आई डेनमार्क बस्ने आप्रवासी समुदाय र डेनमार्कका धेरै स्थानीय बासिन्दा, निकायसँग सम्बध बिस्तार भयो र यसले आगामी दिनमा ठूलो अर्थ राख्नेछ। यत्तिकै कहाँ सकिन्छ र मेरो राजनीतिक यात्रा। बरू घनिभूत रुपमा शुरु पो भयो।
डेनमार्क बस्दै आएका नेपाली समाजको लागि पनि एउटा मार्ग प्रसस्त भएको न्यौपानेको ठहर छ। साना- साना स्कुले नानीहरुमा पनि एक प्रकारको उत्सुकता छाएको छ। कसलाई के थाहा, यीनै कलिला नानीहरु यहाँको राजनीतिमा छाउन पनि त सक्छन कालान्तरमा!
डेनिस समाजमा नेपाली समाजलाई पहिल्यैदेखि राम्रो नजरले हेरिन्छ। यो पटक स्थानीय तहको चुनावी चहलपहलले गर्दा यहाँको एक सचेत बर्ग र माथिल्लो राजनैतिक तप्काको पनि ध्यानाकर्षण भएको न्यौपाने ठान्दछन्। रहरले नभई एक लक्ष्य राखी राजनीतिमा लागेकाले चुनावी एक हार सँगै आफ्नो यात्रा नरोकिने उनी स्पष्ट पार्छन्।
नेपाली समाजको सहयोग:
जितलाई सुनिश्चित गर्न यहाँको सिंगो समाज क्रियाशील रह्यो। करिब एघार हजार डेनिस क्रोनर बराबरको आर्थिक सहयोगले चुनावी गतिबिधिहरुलाई उल्लेख्य सहयोग पुग्यो। फुर्सदको समयमा पायक पर्ने गरी विभिन्न सामाजिक, व्यवसायिक र राजनैतिक संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरु र कतै कुनै संस्थामा आवद्द नभएका व्यक्तिहरु पनि न्यौपानेको चुनावी अभियानमा एक भएर लागे। नेपाली समाजले दर्शाएको यो माया, हार्दिकता र सहयोगको उनी मुक्त कण्ठले प्रशंशा गर्छन्।
प्रतिकुल मौसमका बावजुत पनि चुनावी प्रचार प्रसारमा जाँगरिला युवाहरुले निरन्तर सहयोग गरे।
चुनावी परिणामको विश्लेषण:
२०१३ को स्थानीय निर्वाचनमा ६९५ मत ल्याएका एक डेनिस उम्मेदवार स्थानीय तहको प्रतिनिधिमा चुनिएका थिए। यसपाली न्यौपानेले ६९४ मत पाए। तर छानिन सकेनन्। न्यौपानेको भनाइ अनुसार, सोसल डेमोक्रेट्स डेनमार्ककै सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले पार्टी भित्र ठूलो प्रतिस्पर्धा रहनु स्वभाविक थियो। यसपाली ९६४ मत ल्याउने एक डेनिस उम्मेद्वार छानिन पुगे। यस हिसाबले उनलाई २७० मत पुगेन।
डेनमार्कमा व्यवस्थित हिसाबले बसोबास गर्ने क्रममा गत वर्ष २०१५/२०१६ देखि अहिलेसम्म कोपनहेगन बाहेकका अरू विभिन्न शहरहरूमा करिब ५०० नेपालीहरू बसाईँ सरेकाले स्पष्ट धेरै मत गुम्यो। त्यसैगरि आफूले साझेदारी गरेका स्थानहरू, सम्पर्कमा आएका अन्य समाजका व्यक्तिहरूबाट सोचे जस्तो मत नखसेको न्यौपानेको विश्लेषण छ। अब नेपाली समाजको आडमा मात्र चुनाव जित्न नसकिने भएकाले यहाँको डेनिस समाज भित्र छिर्नुपर्ने अपरिहार्यता पनि उनले राम्ररी बुझे।
चुनावी गतिबिधिहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा गठन भएका सबै समिति र उपसमितिहरुले आफ्नो सीमाक्षेत्र भित्र रहेर चुस्त र स्वस्फूर्त ढंगबाट कार्य गरेको र निर्धारण गरेको रेन्जको तल्लो तहमा पुग्न सफल पनि भएको तर उल्लेखित केही र अन्य प्राविधिक केही कारणहरूले गर्दा चुनिन सकिएन, उनले भने। तर, अब आउने सन् २०२१ को स्थानीय निर्वाचनमा अहिले भएका राम्रा कार्यहरुलाई निरन्तरता दिदै जानेर, नजानेर भएका कमि कमजोरीलाई हटाउँदै सशक्त ढंगवाट अघि बढ्ने र नयाँ इतिहास रच्ने लक्ष न्यौपानेमा अझै मरेको देखिएन।
डेनमार्कको राजनीतिमा पखेटा हाल्दै नेपाली युवा
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १८, २०७४, ०१:१८:५३